चार जना अन्तरिक्ष यात्री पृथ्वीमा सकुशल अवतरण -
२०७८, १९ बैशाख आईतवार १५:३७ May 2, 2021 clickonLeaveaComment on चार जना अन्तरिक्ष यात्री पृथ्वीमा सकुशल अवतरण
वासिङ्टन – स्पेश–एक्स ड्रागन मार्फत् चार जना अन्तरिक्ष यात्री आइतबार बिहान पृथ्वीमा अवतरण गरेका छन् । अमेरिकी अन्तरिक्ष विज्ञान संस्था (नासा) का अनुसार अन्तरिक्ष यात्रीहरु पनामा सिटी नजिकको समुद्री जलक्षेत्रमा अवतरण गरेका छन ।
ती अन्तरिक्ष यात्रीहरु अन्तर्‍ाष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा छ महिना रहेका थिए । उनीहरु जलक्षेत्रमा अवतरण गर्नासाथ डुङ्गा मार्फत उनीहरुलाई बाहिर निकालिएको थियो । नासाले सबै चार अन्तरिक्ष यात्रीले आफूहरु ठीक रहेको बताएको जनाएको छ ।
फ्लोरिडाको तटीय गल्फ अफ मेक्सिकोमा आइतबार बिहान २ बजेर ५६ मिनेटमा पृथ्वीमा उनीहरु अवतरण गरेका थिए । उनीहरुलाई अन्तर्‍ाष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रबाट पृथ्वीमा आइपुग्न साढे छ घण्टा लागेको नासाले जनाएको छ । गत नोभेम्बरमा मिचेल हप्किन्स, भिक्टर ग्लोभर, शानोन वाल्कर र जापानका सोइची नोगुची अन्तरिक्षमा जानु भएको थियो । उनीहरु अन्तरिक्षमा जाँदा एलन मस्कले निर्माण गरेको स्पेश–एक्सबाट प्रस्थान गरेका थिए ।
सात जना अन्तरिक्ष यात्रीहरु अझै पनि अन्तर्‍ाष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र ९ाइेसएस० मा रहेका छन् । उनीहरु गत साता स्पेस–एक्स मार्फत् नै अन्तरिक्षमा पुगेका हुन ।
नेकपा एमाले द्वारा कोभिडविरुद्धको लडाईमा समग्र पार्टी पंक्तिलाई नै स्वयम्सेवीको रुपमा परिचालित हुन आव्हान
अमेरिका कोरोनाबाट मर्नेकाे संख्या १ लाख नाघ्याे
२०७७, १४ जेष्ठ बुधबार ०८:०२ May 27, 2020 clickon
अमेरिका का रास्ट्रपती र उत्तर कोरियाका नेताले आ-आफ्नो अडान कायम राख्दा हिजोको बार्ता बिना निशकर्ष नै टुङियो (भिडिओ)
२०७५, १७ फाल्गुन शुक्रबार ०२:३९ March 1, 2019 clickon
बेलायत मा कोरोना भाईरस संक्रमण बाट मृत्‍यु हुने सन्ख्या अत्याधिक, सरकार द्वारा लकडाउन बाट आहिर अाउदा ज्यान जान सक्ने चेतावनी [भिडिओ]
२०७६, २२ चैत्र शनिबार ०१:४३ April 4, 2020 clickon
तपाइको कुंडलीमा शुक्र कमजोर छ ! जिवनमा चाहेको भैइरहेको छैन! यसो गर्नुहोस
बिदेशमा रहेका पाकिस्तानीहरूले दुख गरी कमाएको रेमिटेन्शले गर्दा देश चलिरहेको छ उनीहरु प्रती दुर्ब्यबाहार किन -प्रधानमन्त्री इमरान खान [भिडिओ]